Nofeembar | 2012 | WEEJIDOW
Archive for Nofeembar, 2012
DEG DEG: Qarax caawa ka dhacay Warshadii Hilibka ee Magaalada Kismaayo
Nofeembar 30, 2012
WAAJIDPRESS – 30 Nov 2012:
Qarax jug xoogan sameeyay ayaa wuxuu goor dhaw oo caawa ah uu ka dhacay Magaalada Kismaayo ee Xaruunta Gobolka Jubbada Hoose, iyadoo uu baqdin ku keenay shacabka reer Kismaayo.
Qaraxaan oo aysan kala cadeyn nooca uu yahay ayaa wuxuu goor dhaw uu ka dhacay Dhismaha Warshadii Hilibka ee Magaalada Kismaayo, oo ku taala Bartamaha Magaalada Kismaayo.
Sawaxan xoogan oo laga maqlay Magaalada Kismaayo ayaa waxaa xigay rasaas aan loo meel dayin, iyadoo ilaa iyo iminka rasaas aan kala joogsi laheyn laga maqlaayo Magaalada Kismaayo.
Shacabka ku dhaqan Magaalada Kismaayo ayaa waxay dareen ka muujinayaan in Ciidamada Huwanta ay wax yeelo kula kacaan shacabka reer Kismaayo, bacdamaa Ciidamada Huwanta looga bartay inay hawl galo ballaaran kula dhaqaaqaan, xilliyada ay qaraxyadu ka dhacaan Magaalada.
Warshadii Hilibka ee Magaalada Kismaayo oo ku taala inta u dhaxeyso Xaafadaha Guulwade iyo Farjano, ayaa waxa suura gal tahay in shacabka aaggaasi ku dhaqan ay hawl galo kula kulmaan Ciidamada Huwanta.
Maanta ayay ahayd markii Magaalada Kismaayo lagu dilay nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Maxamed Fanax, kaasoo ay dhawr xabadood qeybaha sare ee jirkiisa uga dhufteen niman bistoolado ku hubeysnaa.
Magaalada Kismaayo ee Xaruunta Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa labadii bilood ee ugu dambeysay ka dhacaayay weeraro qorsheysan oo dilal iyo qaraxyabo leh, iyadoo ay markaasi fulinayaan Ciidamada Amniyaadka ee kooxda Al Shabaab.
Mareykanka iyo Midowga Africa oo ka arinsaday Xaaladda Somalia
Xoghaya arimaha dibada dalka Mareynkanka Haweyneyda lagu Magacaabo Heliry Clinton ayaa waxa ay la kulmeysaa Gudoomiyaha Midowga Africa haweeneyda lagu magacaabo Nkosazana Dlamini-Zuma. oo dhawaan iyadu loo doortay inay noqoto Madax ururka Wadamada Midowga africa waxaana kulankaasi lagu jeejeexay arimo badan oo Soomaaliya ay ka mid tahay.
Heliri Clinton iyo Nkosazana Dlamini-Zuma ayaa kulankooda waxuu yahay mid inta badan diirada lagu Saarayo arimaha Soomaaliya gaar ahaan ciidamada Midowga Africa ee ku sugan Soomaaliya kuwaasi oo gacansiinaya dowlada Soomaaliya iyo hormarkii ay sameeyeen dhawaan goobihii ugu danbeeyay ay la wareegeen.
Waxaana labada Mas’uul si gaar ah muhiimada u siin doonaan arimaha dhaqaalaha Ciidamada Nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya si loo dhiira giliyo, xaalada Bini-adanimada ee haaysata dadka ku dhaqan Goobaha laga saaray Al-Shabaab iyo Sidii loo sugi lahaa degaanada dhawaan Al-Shabaab laga Saaray.waxaana Sidoo kale warar hordhac ah ee ka soo baxaya kulanka labada Mas’uul ay sheegayaan in lagu Soo hadal qaaday Magaalo xeebeedka Kismaayo ay la wareegeen Ciidamada Huwan bilo ka hor iyo Sidii Magaaladaasi amaankeeda loo hagaajin lahaa oo ciidamada Midowga africa ay qeyb libaaxle kaga qaadan lahaayeen.
Xoghaya arimaha dibada mareynkanka iyo Gudoomisada Midowga Africa ayaa si weyn u amaanay Ciidamada midowga africa sida ay kaga qeyb qaadayanaan dib u soo celinta kala danbeyntii iyo nidaamkii ka jiray Dalka Soomaaliya oo mudo burbursanaa dagaalo jiray owgood,waxayna ugu baaqeen inay sii wadaan dadaalada ay ka wadaan Soomaaliya.
Ugu danbeyntii kulanka oo ay ka soo qeyb galeen Mas’uuliyin ka tirsan wadamada africa iyo madax kale ayaa dhanka kale waxaa loogu hadlo doonaa arimaha Maali oo haatan indhaha beesha caalamka ay hayaan sida ugu fudud ee ciidamo nabad ilaalin ah loogu diri karo iyo arimaha Dalka Jamhuuriyada Dimuqraadiga ee Kongo dhibaatada ka taagan iyo sida lagu xalin karo waxaana shirka ka qeyb galaya Madax ka ka kala socota wadamadaasi.
Shariif Xasan Sheekh Adan oo siyaasadiisii dib u bilaabay Wadana dagaal siyaasadeed uu ku bur burinayo Maamulka…
Warar laga helayo ilo xog ogaal ah ayaa waxaa tibaxayaan in ugu danbeyn labadaas masuul ay is afgarteen islamarkana ay xaliyeen khilaafki hortagna dhisida Maamul Goboleedka Konfur Galbeed State oo ka bilaabanaya MASJIDKA ARBACA RUKUN EE MUQDISHO.
Shariif Xasan ayaa waxaa dhawaan lagu wada in uu boqasho ku taago Magaloyinka Baydhabo ,Marka, iyo Luuq halkaas oo uu ku qaban doono shirar lagu dhiri galinaayo dhismaha Maamul Goboleedka Konfur Galbeed Somalia waxa sido kale uu Siyaasadda caanka ahayd u isticmaali doona dadka dagan Goboladaasi si ay u garab istagaan Howlaha u wado .
DAAWO VIDEO:-Madaxweynaha Soomaliya Xasan Sh.Maxamud Oo Maanta Dib Ugu Soo Labtay Magalada Muqdisho
Madaxaweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Ayaa Maanta Dib Ugu Soo Labtay Magalada Muqdisho.
madaxweynaha Aya faahfaahin waxa uu ka Baxiyey safaradiisii Uu Ku marayey Dalalkajabuuti Iyo Itoobiya waxana Uu Sheegay Inay Heshiiis wax ku ool Ah lasoo galeen.
War Deg Deg Ah: Madaxweynaha Soomaaliya iyo Wafdigiisa oo Goordhow Dib ugu soo Laabtay Muqdisho
Waxa goodhow soo gaaray magalaada Muqdisho wafdi uu hoggaaminaayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kuwaasoo safaro dhowr ah ku soo kala bixiyay waddamo ku yaalla geeska Africa.
Wafdiga madaxweynaha oo ay ka mid ahaayeen wasiirka gaashandhiga Cabdixakiin Maxamuud Fiqi, ra’iisal wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ahna wasiirka arrimaha dibedda Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan iyo mas’uuliyiin ka tirsan xafiiska madaxtooyadda Villa Soomaaliya.
Madaxweynaha iyo wafdiga la socday markii ay diyaarada ka soo dageen, waxa soo dhaweeyay Gudoomiyaha baarlamaanka Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo ra’iisal wasaaraha xukuumadda Cabdi Faaarx Shirdoon.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa hadda ku sugan qolka VIP-da ee garoonka diyaaradaha Muqidsho, halkaasoo goordhow lagu wado inay kula hadlay saxaafadda.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa ka soo laabtay waddamada Ethiopia iyo Djibouti.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdigiisa ayaa la filayay maanta in ay gaaran dalka Kenya, waxayse wararku qaar tibaaxayaan in uu jiro Khilaaf Madaxda Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya, walow horey loo shaaciyay in madaxweynaha uu booqashadiisa waddanka Saddexaad ay u ahayd Kenya.
War deg deg ah: Madaxweyne Xasan:- “Ethiopia ayaa dib u dhiseysa Milatariga Somalia”
Madaxweynaha Somalia oo shalay booqasho ku tagay magaalada Addis-Ababa, ayaa ammaanay wax uu ugu yeeray kaalinta Ethiopia ee dhismaha nabadda iyo xasiloonida Somalia.
Xasan Sheikh Maxamuud, ayaa sheegay in Ethiopia aysan waxba la harin marka ay timaado dadaalladeeda ku wajahan joogteynta xasilooni iyo nabad lagu soo dabbaalo Somalia.
Madaxweynaha ayaa dhinaca kalena sheegaya in Ethiopia ay ku tabrucday inay dib u dhis ku sameyso ciidamada xooga dalka Somalia.
“Tabarucaadda Ethiopia ee ku aadan dhismaha milatariga Somalia, waa mid aad muhim u ah” ayuu yiri Xasan Sheikh.
Si kastaba dad badan ayaa shaki ka qaba inay xaqiiq tahay in Ethiopia ay kaalin ka qaadaneyso dib u dhiska milatariga Somalia, sababo la xiriria xafaaltankii hore ee labada dal.
Madaxweynaha ayaa Ethiopia ku ammaanay taageerada ay la garab taagan tahay dadka Soomaaliyeed ee dalkeeda ku nool.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaaraha Ethiopia Hailemariam Dessalegn ayaa sheegay in ciidankiisa ay sii joogi doonaan dalka Somalia, inta laga xaqiijo in Al-Shabaab ay ka gaarto heer aysan weligeed dambe dib usoo noolaan.
War deg deg ah: Dowlada Falastiin OO loo ogolaadey ka mid noqosha THE UNITED NATIONS.
Saacad kahor golaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa waxa ay u fariisteen mashruuc ay keentay dawlada Suudaan kaasoo golaha guud ee looga codsanayo in dawlada Falastiin la siiyo xubin korjoogto ka ah Qaramada Midoobay.
Falastiin madaxweynaheeda Maxamuud Cabaas ayaa maanta golaha guud ee Qaramada Midoobay horegeyay mashruucan ay ku dalbanaayo in dowladiisa loo ogolaado ka qeybgalka kulamada Qaramada Midoobay inkastoo aysan xubin rasmi ah ka ahayn Qaramada Midoobay.
kulankaan ayaa iskugu yimid dalal gaaraya illaa 126 dawladood, waxaana ku jirta dawlada Soomaaliya oo ka mid ah dawladaha sida weyn u taageeray in Falastiin ay kamid noqoto Qaramada Midoobay.
Hadaba waxaa suura galay wax yar kahor in Falastiin xubin ka noqodaan ururka qaramada midoobay, arinkaan ayaa la dhihi karaa in dadka reer falastiin ay gaareen xaquuq ay ku taamayeen ku dhawaad boqol sano.
WAR DEG DEG AH:- Dagaal xoogan oo ay ka qeyb qaadanaayaa diyaarado dagaal oo dib uga qarxay gobalka Gedo.
WAAJIDPRESS 30 Nov 2012:
Wararka haatan naga soo gaaraya gobalka Gedo ayaa waxay sheegayaan in uu dib u qarxay dagaal qaraar oo ay ka qeyb qaadanaayaan diyaarado dagaal kaa oo u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaaya kuwa Kenya iyo Al-shabaab oo dhinac ah.
Dagaalkaan ayaa qarxay ka dib markii ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ay duulaan culus kusii qaadeen fariisin ciidamada Al-shabaab ay ku leeyihiin duleedka degmada Garbahaareey ee xarunta gobalkaasi.
Ilaa iyo haatan macadda qasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka dhashay waxaana la isku adeegsanaayaan hubka cul culus, iyadoona xaaladda guud ay tahay mid aad iyo aad u kacsan.
Waxaan isku daynay inaan xiriir la sameenno qaar ka mid ah saraakiisha dowladda Soomaaliya si aan faah faahin dheeraad ah u helno hase ahaatee waa inoo suurta geli weysay arintaasi.
BARO MAGACYADA ALLAH
الله –الرحمن — الرحيم — الملك — القدوس– السلام المؤمن — المهيمن — العزيز — الجبار — المتكبر –الخالق البارئ — المصور — الغفار — القهار — الوهاب — الرزاق –الفتاح– العليم — القابض — الباسط — الخافض — الرافع –المعز –المذل — الس ميع — البصير — الحكم — العدل–اللطيف — الخبير –الحليم — العظيم — الغفور — الشكور العلي — الكبير – – الحفيظ– المقيت — الحسيب — الجليل–الكريم — الرقيب — المجيب –الواسع — الحكيم — الودود–المجيد — الباعث — الشهيد — الحق –الوكيل — القوي–المتين — الولي — الحميد — المحصي — المبدئ– المعيد-المحيي — المميت — الحي — القيوم — الواجد — الماجد الواحد — الأحد — الصمد — القادر — المقتدر — المقدم–المؤخر — الأول — الآخر — الظاهر — الباطن — الوالي–المتعالي –البر — التواب — المنتقم — العفو — الرءوف–مالك الملك — ذو الجلال والإكرام — المقسط — الجامع–الغني — المغني — المانع –الضار — النافع — النور — الهادي — البديع — الباقي — الوارث– الرشيد — الصبور
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Nofeembar, 2012.